တိုတိုထွာထွာသတင်းများ | ထွေထွေထူးထူး ကိုရွှေထူး
Leaveareply	(1) ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ခြံဝင်းအတွင်း ကျင်းပမည့်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ပြည်တွင်းဂျာနယ် ၄ စောင်သာ တက်ရောက်ခွင့်ရရှိ
၂၀၁၂ နိုဝင်ဘာလ ၁၉ ရက်နေ့၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နေအိမ်ခြံဝင်းအတွင်း သမ္မတ အိုဘားမား နှင့်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပါအ၀င် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်များနှင့် တွေ့ဆုံပြီးနောက် ကျင်းပမည်ဖြစ်သော သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကို တက်ရောက်ရန်အတွက် ပြည်တွင်း ဂျာနယ် ၄ စောင်နှင့် နိုင်ငံခြားသတင်းဋ္ဌာန ၃ခုကိုသာ ရွေးချယ် သတင်းယူခွင့်ပြုလိုက်ကြောင်း သိရှိရသည်။
(2) မဟာရန်ကုန်မြို့ပြစီမံကိန်းအတွက် ဂျပန်နှင့်ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီတို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီ
စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီနှင့် ဂျပန်နိုင်ငံတို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တော့မည်ဖြစ်ကြောင်း ၂၀၁၂ခု နှစ် နိုဝင်ဘာလ (၁၄)ရက်က ရန်ကုန်မြို့တော်ခန်းမ၌ ပြုလုပ်ခဲ့ သော သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှ သိရသည်။
(The Hot News Weekly)
(3) နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးသည် ယနေ့ မွန်းလွဲ(၂)နာရီတွင်
နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး၌ နိုင်ငံတော်ဗဟိုသံဃာ့ဝန်ဆောင်ဆရာတော်ကြီး အမှူးပြုသော ဆရာတော်ကြီးများ၊ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် အကြီးအကဲများနှင့် တွေ့ဆုံကာ ရခိုင်ပြည်နယ်ဖြစ်စဉ်အခြေအနေများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ (HmuuZaw)
(4) ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ရေနံထုတ်လုပ်သူ ၂၀၂၀ ခုနှစ်ခန့်တွင် အမေရိကန်ဖြစ်လာနိုင်
ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့များ အံ့မခန်းအောင် ထွက်ရှိနေသောကြောင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသည် ဆော်ဒီအာရေ ဗီးယားကို ကျော်လွန်ကာ ၂၀၂၀ ခုနှစ်ခန့်တွင် ကမ္ဘာ့နေရနံ ထုတ်လုပ်မှုကို ဦးဆောင်နိုင်တော့မည်ဟု နိုင်ငံတကာ စွမ်းအင်အဖွဲ့အစည်း (IEA)က ပြောကြားခဲ့ကြာင်း နိုဝင်ဘာ ၁၄ ရက်က ဆင်ဟွာ သတင်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။ (Khit Lu Nge)
(5) မြန်မာ့ကုန်သွယ်ဖက်နိုင်ငံများရဲ့ ငွေကြေးရက်သတ္တပတ်
ယခုရက်သတ္တပတ်အတွင်း နိုဝင်ဘာ ၆ ရက်မှာ အမေရိကန် သမ္မတ ဘားရက်အိုဘားမားက ဒုတိယ သက်တမ်းအဖြစ် ပြန်လည် ရွေးချယ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် အမေရိကန် ဗဟိုဘဏ်က ဒေါ်လာဖြန့်ဖြူးမှုကို ဆက်လက်မြှင့်တင်သွားလိမ့်မယ်။ (Myanmar News Zone
မနောမြေအသင်း CEOနှင့် Daily Sport နှစ်ဦး ယာဉ်မတော်တဆမှုကြောင့်ကွယ်လွန်” ရန်ကုန်၊ နိုဝင်ဘာ ၁၅ ရက် ယမန်နေ့ နိုဝင်ဘာ ၁၅ ရက် ည ၉ နာရီခန့်က မြန်မာနေရှင်နယ်လိဂ်ကလပ်အသင်း ကချင်ပြည်နယ် ကိုယ်စားပြု မနောမြေအသင်း၏ CEO ဖြစ်သူ ဦအောင်နိုင်စိုးနှင့် Daily Sport အားကစားဂျာနယ်မှ နှစ်ဦးသည် တိုက်ကြီးမြို့နယ်အတွင်း၌ ယာဉ်မတော်တဆမှုကြောင့် ကွယ်လွန်သွားခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
Share this:Click to email (Opens in new window)Share on Facebook (Opens in new window)Click to share on Twitter (Opens in new window)Click to share on Google+ (Opens in new window)Click to share on Pinterest (Opens in new window)Like this:Like Loading...
This entry was posted in ကမ္ဘာ့သတင်း, မြန်မာသတင်း, News on November 17, 2012 by koshwehtoo.	Post navigation
← ၂ ထရီလီယံလိုငွေပြတဲ့ တို့နိုင်ငံ
ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ၏ မေတ္တာရိပ်၊ ကရုဏာရိပ်
အောက်တွင်တည်ရှိပါသောကြောင့် -မှီတင်းနေထိုင်ကြသော နိုင်ငံသူ၊ နိုင်ငံသားအားလုံး
နှင့် နတ်လူသတ္တ၀ါအပေါင်းတို့သည် - ဘေးရန်ခပ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေ၊
- ကောင်းမှုမြတ်နိုး၊ ကောင်းအောင်ကြိုး၍၊ ကောင်းကျိုး
ကိုယ်၌ တည်နိုင်ကြပါစေ။ "
eXchange Rate	From AGD Bank FEC
TODAY: 2nd January, 2013 Buy : 853 Sell : 859
Buy : 853 Sell : 859
Buy : 697 Sell : 707 Buy : 1120 Sell : 1130 From KBZ Bank FEC
TODAY: 2nd January, 2013 Buy : 852 Sell : 858
Buy : 842 Sell : 858
Buy : 695 Sell : 707 Buy : 1122 Sell : 1140 သတင်းနဲ့စာမူများ ပေးပို့လိုပါက	သတင်းများနဲ့ စာမူများကို ပေးပို့မယ်ဆိုရင် sentnewstoblog@gmail.com ကို ပေးပို့နိုင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Blog Stats	378,887 hits
Recent Posts	၀ဋ်ဆိုတာ ဘ၀မကူးပါဘူး ဦးဆန်းဆင့်ရယ်